काठमाडौं । पछिलो समय सामाजिक सचेतनामुलक गितमा धेरै जोड दिने सर्जक, लोक तथा दोहोरि गायक प्रभावन जेको रेडियो नेपाल मा पहिलो पटक रेकर्ड गराएका गित बर को छायाले डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ । २०५३ साल मा रेडियो नेपाल मा रेकर्ड गरिएको जसमा चर्चित गायिका तारा थापा ज्यु ले साथ दिनु भएको थियो, सोहि गित २०६१ सालमा रि–रेकर्ड गरिएको र चर्चित...
काठमाडौं । डी. ए.आर. मुभिज एण्ड फिल्म्स ई.प्रा. लि. ले ८ बर्षीय गायिका आभा आर को आवाज मा रहेको गीत ‘घरमै बसौ न’ बजार मा लेराएको छ । गीतमा कोरोना भाईरसले विश्व आक्रान्त पारेको अवस्थामा सरकारले जारि गरेको लक डाउन पालना गरि घरमै बसी सुरक्षित रहन सन्देश दिईएको छ । गीत को शब्द संगीत प्रभावन जे को...
काठमाडौं । योगेश काजी र सारिका घिमिरेको स्वर रहेको गीत ‘मायाको सुगन्ध’ सार्वजनिक भएको छ । सारिका घिमिरेको शब्द अनि योगेश काजीको सङ्गीत÷सङ्गीत संयोजन रहेको ‘मायाको सुगन्ध’ गीतको भिडियो कार्टुन्ज क्रुको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक भएको करिब ६ घण्टामै युट्युबको ट्रेन्डिङ्गमा आएको भिडियोमा सरोज...
काठमाडौं । पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम नेपाली कथानक अभिनित चलचित्र ‘अनुराग’ ओ.एस.आर. डिजिटलमार्फत युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ । सांगितिक प्रेमकथामा आधारित उक्त चलचित्र ऋषिराज धमलाको प्रस्तुतिमा तयार भएको हो । उक्त चलचित्र सत्यराज चौलागाँईले निर्देशन गरेका हुन् । यस चलचित्रमा एलिजा गौतम, समुन्द्र पण्डित, ठिलेन लामा,...
काठमाडौं । मेक्सिकोमा कोरोना बियरको उत्पादन अस्थायी रुपमा बन्द भएको छ । कोरोना बियरको उत्पादक ग्रुपो मोदेलोले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण तत्कालका लागि मेक्सिकोमा उत्पादन बन्द गरिएको जनाएको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले ट्वीटरमा वक्तव्य जारी गरी मेक्सिको सरकारले अत्यावश्यक नरहेको व्यवसायहरु बन्द गर्न भनेकाले कोरोना बियरको...
पेरिस । विश्वभर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण २४ हजार ८८३ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । विश्वभर पाँच लाख ४९ हजार ४७४ व्यक्ति सङ्क्रमित भैसकेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु इटलीमा आठ हजार २१५, स्पेनमा चार हजार ८५८, चीनमा तीन हजार २९२, इरानमा दुई हजार ३७८, फ्रान्समा एक हजार ६९६ र अमेरिकामा एक हजार ३०४ जनाको मृत्यु भएको छ...
काठमाडौं। भारतको केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरसबाट निधन हुने बिरामीहरूको परिवारलाई ४ लाख मुआवजा दिने गृह मंत्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) मार्फत सहायता प्रदान गर्ने भएको हो । गृह मन्त्रालयले कोविड १९लाई एक अधिसूचित आपदाको रूपमा घोषणा गरेको छ। ...
काठमाडौं । हिमेश पन्त रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनका विजेता बनेका छन् । शनिबार भएको ग्राण्ड फिनालेमा उनले सुनम कोइराला र खड्गबहादुर पुनलाई पछि पार्दै पहिलो सिजनको उपाधि हासिल गरेका हुन् । उनले २५ लाख नगदका साथै कार पाएका छन् । अन्य आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर समेत प्राप्त गरेका छन् । ...
काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको गीत ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्म...’ सार्वजनिक भएको छ । हिराकाजी थापाकोे शब्द, रोशन गुरुङको सङ्गीत र नोर्वु लामोको एरेञ्ज रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । कृष्ण रसालकोे निर्देशन र टेक छिरिङ लामाको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा रेशम फिरिरि, सृष्टि खड्का, करण बराल, सुभाष गजुरेल,...
काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा रहेको गीत ‘एक्लै छु म’ सार्वजनिक भएको छ । प्रशान्त पौडेलको शब्द तथा सङ्गीत, विशाल निरौलाको एरेञ्ज र नरेश विविसीको मिक्सिङ, माष्टरिङ रहेको गीतको भिडियो बिहिबार सार्वजनिक भएको हो । देवेन्द्र पाण्डेको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा लोकप्रिय नायिका वर्षा राउत र नायक राम बाबुलाई फिचरिङ...
काठमाडैं । नेपाल आफैमा धेरै जातजाती भाषा धर्म संस्कृति, रहनसहन, परम्परा, साहिष्णुता ईत्यादी भएको राष्ट्र हो । नेपालीको गीत संगितको बजार सानो रहेको छ भने यहाँ बोलिने मातृभाषाको अझै हालत भने दिनप्रतिदिन लोपोन्मुख जस्तै बन्दै गइरहेको छ । त्यसमाथी कुनैपनि संस्कृति,भाषा संग सम्बन्धि रहेर काम गर्न एकदमै...
काठमाण्डौ । तामाङ समुदायका महानायक अमिर दोङ अभिनित ुह्वाम्ला मायासेु बोलको गीत बजारमा आएको छ । समुदायका महानायकको उपनामले परिचित दोङलाइ फरक लुक्समा भिडियोमा देख्न सकिन्छ । तामाङ समुदायमा सबैभन्दा धेरै चलचित्रमा नायकको मिकामा अभिनय र निर्देशन गरेका दोङले नेपाली चलचित्र सुर्य किरण समेत निर्देशन गरिसकेका छन । उनले १ हजार भन्दा...
काठमाडौं । नायिका करिश्मा मानन्धरले यस वर्षको होली नमनाउने भएकी छिन् । हरेक वर्ष होलीमा घरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएकी करिश्माले यस वर्ष कोरोनाका कारण होलीको कार्यक्रम स्थगित गर्नुपरेको जनाएकी छिन् । गत वर्ष एइईका कारण होलीको कार्यक्रम स्थगित गरेको उनले यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण रोक्नु पर्दा दुखी भहेको बताइन् । उनले होलीका लागि...
काठमाडौँ । तामाङ फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पोलिटव्यूरो सदस्य तथा निर्देशक अरुण घिसिङद्वारा निर्मित चलचित्र ‘ख्लासी आनिउ’ को पहिलो गीत ‘डिहिरी छार्वा’ सार्वजनिक भएको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उक्त चलचित्रको पहिलो गीत सार्वजकि गरिएको हो । तामाङ समूदायको...
काठमाण्डौ । गायक रन्जित लामाको ‘नक्कली छामे’ बजारमा आएको छ । गीतमा कबिन्द्र तामाङको शब्द,एन बि थापाको संगीत रहेको छ भने आगा लामाले एरेन्ज गरेको गीतलाई गायक रन्जित लामा र गायिका जितु लोप्चनले स्वर दिएका छन । ‘डाँडापारी’बोलको गीतबाट उनलाई साङ्गितिक क्षेत्रमा थप चिनाउने मौका मिल्यो । लामाले गाएको गीतहरुमध्ये ‘डाडापारी’,आउन...